तपाई ग्रिनकार्डवाहक हुनुहुन्छ ? तपाईले पब्लिक चार्जबारे जान्नुपर्ने ५ कुरा « Khasokhas
तपाई ग्रिनकार्डवाहक हुनुहुन्छ ? तपाईले पब्लिक चार्जबारे जान्नुपर्ने ५ कुरा
सरकारी सुविधा लिनेलाई ग्रिनकार्डमा कडाई गर्ने ट्रम्प प्रशासनको पब्लिक चार्जको नियम फरबरी २४ बाट लागु हुने भएको छ । यो नियम लागु भइसकेपछि अमेरिकामा खाद्य, स्वास्थ्य र आवास लगायतका क्षेत्रमा सरकारी सुविधा खाने सम्भावना हुनेहरुलाई ग्रिनकार्ड र भिसा अस्वीकार गर्न सकिने भएको छ ।
नयाँ नियम अनुशार अमेरिकी सरकारले ग्रिनकार्ड जारी गर्नु अगाडि सरकारी सुविधा खाने सम्भावना भए नभएकोबारे निर्धारण गर्ने भएको छ । आवेदकको उमेर, स्वास्थ्य, आम्दानी, शिक्षा, दक्षता लगायतका विभिन्न अवस्थाको आधारमा सरकारी सुविधा लिने सम्भावना भए नभएको निर्धारण गरिने अमेरिकी सरकारले जनाएको छ ।
यदि तपाई ग्रिनकार्डवाहक हुनुहुन्छ भने पब्लिक चार्जको नियमबारे जान्नुपर्ने ५ कुराहरु यसप्रकार छन् :
१, यदि तपाईसँग पहिले नै ग्रिनकार्ड छ भने यो नियमबाट तपाईलाई खास असर पर्नेछैन । तपाई ग्रिनकार्डवाहक हुनुहुन्छ भने सरकारी सुविधा लिन सक्नुहुन्छ ।
२, यदि तपाई ग्रिनकार्डवाहक हुनुहुन्छ र सरकारी सुविधा लिनुभएको छ भने तपाईलाई ग्रिनकार्ड नविकरण गर्दा कुनै समस्या पर्नेछैन ।
३, ग्रिनकार्डबाहकलाई सरकारी सुविधा लिएकै आधारमा देशनिकाला गर्न सकिदैन । सरकारका लागि सरकारी सुविधा लिएकै आधारमा ग्रिनकार्डबाहकलाई देशनिकाला गर्न लगभग असम्भव छ ।
४, यदि तपाई ग्रिनकार्डवाहक हुनुहुन्छ र तपाईले १८० दिनभन्दा बढी समय अमेरिका बाहिर बस्नुभएको छ भने तपाईका लागि पब्लिक चार्जको नियम लागुहुनसक्छ । ग्रिनकार्डवाहक एकपटकको यात्रामा १८० दिनभन्दा लामो समय अमेरिकाबाहिर बसेको खण्डमा अमेरिका फर्कदा पोर्ट अफ इन्ट्रीमा तपाईलाई पब्लिक चार्ज हुने नहुने अर्थात् सरकारी सुविधा लिने नलिने सम्बन्धमा सोधपुछ गरिन सक्छ । यदि तपाई १८० दिन भन्दा लामोसमयका लागि अमेरिकाबाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने लाइसेन्सप्राप्त कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गर्नुहोला ।
५, यदि तपाई ग्रिनकार्डवाहक हुनुहुन्छ भने नागरिकता आवेदनका लागि पब्लिक चार्जको नियमले कुनै असर गर्नेछैन । यद्यपी तपाईलाई अध्यागमन अधिकारीहरुले योग्य नभएको बखत सरकारी सुविधा लिए नलिएकोबारे प्रश्न सोध्न सक्छन् । तपाईले अमेरिकी नागरिकताका लागि आवेदन दिनु अगाडि लाइसेन्स प्राप्त र विश्वासिलो कानुन व्यवसायीसँग तपाईले विगतमा लिएको सरकारी सुविधाको इतिहासबारे पुनरावलोकन गर्नुहोला ।